Mayelana NATHI - Wisdom Metal Composites Co., Ltd.
I-Alucosun, uhlobo olusha lomakethe ye-Aluminium Composite Panel! Ithimba lethu linokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 ku-Aluminium Composite Panel Industry, kusuka ekukhiqizeni kuya ekuthuthukisweni komkhiqizo. Manje sesikulungele ukuba ngumkhiqizi ohola phambili womhlaba jikelele ngobuchwepheshe bamuva kanye nokunakekelwa kwamakhasimende okuphakeme nokuxhaswa.
Kusukela ekuqaleni nje, i-Alucosun ibilokhu igcine amehlo ayo evulekile kulo lonke lolu hambo, kusukela ekwamukelweni kwempahla eluhlaza kuya kumkhiqizo wokugcina. Zonke izici kusuka ekwakhiweni ukukhiqizwa zigcwaliseka ngohlelo lokulawula ikhwalithi - olwakhiwe ngokuphelele ngabahloli abangochwepheshe kanye nezinto zokusebenza ezisezingeni eliphakeme, ukuqinisekisa ukuthi yonke imikhiqizo ihambisana nezindinganiso zamazwe omhlaba: I-European Germany DIN, i-Commonwealth UK BS, i-American ASTM, iMiddle East kanye njalonjalo.
Ithimba le-Alucosun lizinikele ekusekeleni amakhasimende ethu ngokunikeza ngesikhathi ukulethwa kwemikhiqizo nezinsizakalo ezinokwethenjelwa eziphakeme kakhulu. Zonke lezi zinto zingasiza ekutholeni inzuzo yokuncintisana emakethe yakho. Sihlose ukugcina umbono wethu nenhloso yethu ngokufuna njalo ukwenza ngcono nentuthuko ngemfundo eqhubekayo nokufunda. Sihlose ukuthuthukisa ubuchwepheshe obusha nemikhuba emihle yebhizinisi. Ukuze kube nokusimama okugcwele, abasebenzi bethu bayaziqhenya ngathi, futhi sihlose ukuhlinzeka ngemvelo ethokozisayo, enakekelayo nokukhula ekhuthaza abasebenzi bethu ukuthi bakhiqize kakhulu futhi bazikhulisele bona ngokwabo nangobungcweti.
sihlanganyela inkolo efanayo ukuthi hhayi kuphela ukufaneleka, kodwa futhi nesimo sengqondo singanquma ikusasa lethu.
Woza ukusebenzisana nathi futhi usenze umlingani onokwethenjelwa womunye nomunye!
I-Alucosun ifakwe okokumboza okubili kanye nolayini bokukhiqiza be-lamination abahlanu (kufakwe umugqa wobubanzi obungu-2000mm). Ngokuhlangenwe nakho kweminyaka engaphezu kwengu-20 i-Alucosun isakaze amaphiko ayo emhlabeni wonke ngokunikeza amakhasimende ayo ngemikhiqizo ezinzile nekhwalithi.
1) Imininingwane yesisetshenziswa:
Imishini Han & emuva 3 amasethi
Imigqa Yokuhlanza Amakhemikhali 2 amasethi
Imigqa Yesivinini Esisheshayo 2 amasethi
Imigqa Yokwakheka 5 amasethi
2) Umthamo wokukhiqiza / unyaka:
Amaphaneli Wokuhlanganiswa Kwe-Aluminium 7.6 million / sqm
Amaphaneli we-Aluminium Lattic 1 isigidi / sqm
Aluminium Camera Ohlobo 18500 amathani